Egypt Travel Guide | A Couple for the Road
Chikamu Chekubudirira, uye nzvimbo yenhema dzinosanganisira pharaohs, makuva, mapiramidi uye mhiko dzakavanzika, Ijipiti nyika inoshamisa. Vakwegura kudarika zvatingaziva uye zvisinganzwisisiki kupfuura zvatingafungidzira, Ijipiti ichiri nyika inowanzoitwa nevashanyi pasinei nevematongerwo enyika uye zvematongerwe enyika akazviona zvichiri kutsungirira nguva dzinonetsa mumakumi mashoma apfuura. Pasinei neizvi, Ijipiti inoshevedza kumhanyiro mukati memumwe nomumwe wedu, kuziva kuti vaiva vanaani uye kubva kupi kwatakasvika.
Monastery yeSt. Catherine
Mari: Pound Egyptian (EGP). EGP ikozvino 18 ye 1 USD, uye inoshamisa zvikuru zvisingabatsiri kunze kweiyo nzvimbo dzekushanyirwa dzinotanga, dzakasimbiswa zvakasimba.
Power Adapter: MuEgypt mabheti emasimba ndeyechimiro C uye F. Mhepo yakakwana ndeye 220 V uye inowanzo yakareba ndeye 50 Hz.
Emergency Number: 122 yePurisa, 123 yeAmbulensi.
Makumi makumi maviri namashanu apfuura Colombia yakanga iri kudivi pamucheto wekutadza kwe statehood uye Medellín, guta repiri reEssene guru rechipiri raiva nhoroondo yehondo ye narco. Iyi mhirizhonga yakagadzira mukurumbira wakave wakavhara nhoroondo yeguta racho, tsika yakasimba, uye nyika inoshamisa. Ichangobva kuitika vafambi vemunyika yose vanoona matombo akavanzwa pasi pechisimba. Aya matombo ari kuita kuti zvive nyore kuti vashanyi vabve ... Read More
"Best Bars muSan Francisco" yakanyorwa naIna McFadden - bhaglogi yekufamba uye munyori wekuzvipira. Pakutanga kubva kuCalifornia, ave achinyanya kufamba pasi kubvira 2013. Paanenge asina kunyora, unogona kumuwana achikanda pombi yewaini, achidzingana nemvura, kana kuronga kuti adzokere kune imwe nyika mune imwe nyika. Mushure mokugara kune imwe nyika kwemakore mashanu muAustralia, ... Read More
Kana iwe uchitsvaga inokurumidza, yakaderera-carb, uye ine hutano appetizer iyo iri kuzadza zvakakwana kuti iwe ugare uine chizere, aya e-Italian-maitiro akarongedzwa portobello mushwa akakwanira iwe! Uchishandisa zvimiro zvechinyakare zveItari, iwe unogona chaizvo kuita zvakawanda zvakasiyana nekudya uku. Kuti musanganise zvinhu zvishoma, edza kubheka izvi nechinobata tsvuku pasita svutugadzike inogona kuve yakasanganiswa mukuzadza… Read More
Mufambiro Wekufambira kuIstanbul muHurongwa
Cal Bailey anomhanya Mountain Leon - bhuku rekufambisa rakatanga mushure memaviri maviri pamusoro pekudzoka pasi pasi rose. Kana uchida kudzidza zvakawanda nezvehupenyu mumugwagwa kana mazano ekufambisa, iwe unogona kuverenga mutsva wake wekupedzisira pamusoro pokusarudza bhagi rakakodzera rokurara. Turkey ndiyo nyika yakanaka yakazara nezvinhu zvinonakidza zvokuita uye nzvimbo dzinoona. Nhamba imwe ... Read More
10 Historical Sites Kuti Uone muGuatemala
Guatemala inyika inonakidza yeCentral America, ine sandwiched kuchamhembe-chikamu chikuru chepakati peMexico, Belize, Honduras neEl Salvador. Nzvimbo inoshamisa yekutarisa makomo emakomo, masango emvura, makomo anoputika, uye matongo ekare, Guatemala inopa mukana wezororo hwevaya vanovanda mune imwe nyika duku yakazara zvizere, zvinzvimbo zvekare. Chii chinoisa chinzvimbo chezvakaitika kare muGuatemala hachisi ... Read More
Yekupedzisira Cream Cheese Chinyorwa - Pairings, Matipi uye Zvimwe!
Kirimu kirimu yakafanana nechikafu chemashiripiti. Zvinotaridza kuti zvese zvinobata zvinoshanduka kuita yegoridhe yeuchenjeri. Chii chinoenda neCream Cheese, uye iwe unogona sei kuchishandisei kwazvo mumazuva ese ekubika kuchengeta kicheni yako ichigadzira uye inonaka? Kana iwe uine kirimu chechizi yakarara mukicheni yako, hezvino zvimwe zvezvinhu zvekudya zvaunogona kuzvipfekedza izvo zvingangodaro zvisina… Read More
Chiang Mai, iyo yakakomberedzwa nemakomo mazhinji uye tembere, ndiro kuchamhembe guta reThailand. Inonzi ndiyo inonyanya nzvimbo yevashanyi yekuongorora tsika dzeThai voita zviitiko zvinonakidza. Heino runyorwa rwezvinhu zvinonakidza muChiang Mai, Thailand kuti mushanyi wese anofanira kuona kana kamwe chete muhupenyu. General Ruzivo Mari: Thai Baht (kumativi… Read More
Kwamuri Kuwana Fado Music In Lisbon, Portual
Fado mumhanzi, rwiyo rwomumhanzi rwePortua, rwunoshushikana zvikuru uye rune shungu rwevanhu rwiyo rwenhema runogona kuwanikwa kumashure e1820s (uye zvichida yapfuura) muLisbon. Fado aiva nenzira dzakawanda kutaura uko vanhu vakadzingwa vaitaura manzwiro ekugumburwa, kusurukirwa, nekusiya zvachose panguva ye1960s uye 70s, sezvo vose vePortugal vakawira muhuori hwezvematongerwe enyika - ... Read More